Wasiirka Amniga oo Isbitaalka Bilcil Carmo ku Booqday Dhaawacyadii Afurur (dhegayso) – Radio Daljir
Wasiirka Amniga oo Isbitaalka Bilcil Carmo ku Booqday Dhaawacyadii Afurur (dhegayso)
Siteenbar 3, 2017 1:44 b 0
Wafdi wasiiro ah ayaa maanta booqday dhaawacyadii shalay la soo gaarsiiyay isbitaalka Bilcil Carmo. Wafdiga oo ay ka mid ahaayeen Wasiirka Maaliyadda, Amniga, Wasiiru Dowlaha Xanaanada Xoolaha iyo saraakiil kale ayaa kormeeray xaaladda bukaanada isbitaalka Bilcil Carmo.
Wasiirka Amniga Puntland, Axmed Cabdulaahi Yuusuf Doobir, oo maamulka isbitaalka ka waraystay xaaladda dadka dhaawaca ayaa guddoonsiiyay laba gaari oo nooca gurmadka degdega maamulka degmada Carmo ee gobolka Bari si loogu adeego bulshada.
Wasiirka oo ka hadlay weerarkii shalay ayaa sheegay dadkii qaraxa dhigay in ay ahaayeen dambiilayaal kuwaas oo sida uu yiri lagu soo beegay xilli dadku ay ku jireen dabaaldegga ciidda. Wasiirka ayaa shacabka u soo jeediyay in ay mar walba feejignaan sameeyaan, oo ay laamaha kaladuwan ee ciidamada soo wargeliyaan.
Wasiirka Amniga Puntland ma uu soo hadal qaadin tilaabada ka dowlad ahaan iyo waxa uga qorshaysan weerarada soo noqnoqday ee Afurur iyo kuwa gobolada kale ee Puntland, iyo kuwii ugu danbeeyey ee Jeexdin iyo Ballibule ee gobolka Mudug.